Mahamenatra fa tsy ampy fanabeazana ! | NewsMada
Mahamenatra fa tsy ampy fanabeazana !
Raha ny « Afindrafindrao » sy ny « Diavolana fenomanana takariva » no ovaina, mba azo leferina ihany, fa ny tahaka itony kosa, sangy mihoatra ny loha. Taitra avokoa izay rehetra naheno ny hiram-pirenena malagasy tao anatin’ilay fiara fitaterana fa nanjary hafahafa ny fandrenesana ny « Ry tanindrazanay malala ô ! ». Nifanaretsaka ny fanontaniana : « Fa angaha moa niova ny hiram-pirenena malagasy ?», « fa iza izany mihira azy izany ?», « azo atao angaha ny manova hiram-pirenena amin’izay itiavan’ny tsirairay azy ?», « iza koa izany radio mandefa azy izany ? », sns. Samy niezaka ny namaly teo ny tsirairay…
Porofo iray mitohoka amin’ny tenda ny tranga tahaka io. Tsy ampy fanabeazana ny Malagasy ka manaotao foana. Tsy mahafantatra akory ny lanjan’izany atao hoe hiram-pirenena izany. Voamarina ihany koa fa samy maka ho azy ny fiarahamonina malagasy. Tsy mba nisy na olona iray aza, ve niteny fa tsy azo atao ny manova ny hiram-pirenena na manaka-danitra aza ny talenta ananana ?
Heverina ho kely ny tahaka itony fa manana fiantraikany goavana be eo amin’ny foto-pisainana iray manontolo mihitsy. Ny teknolojia rahateo, afaka mampita sy mahatafita zavatra maro ao anatina fotoana fohy. Raha io rindrantsary na rakipeo io no tafatsofoka any anaty tambanjotrantserasera samihafa (na sanatriavina efa lasa any mihitsy), hanao ahoana ny ho vokany ?
… Ho an’izay tsy manan-talenta amin’ny famoronana fa kinga amin’ny famerenana. Ho an’izay mahay mihira be (araka ny fomba fiteny). Ho an’ireo te hisongadina amin’ny talentany, sns. Azo atao tsara ny mihira ny hiram-pirenena malagasy araka ny namoronan-dRahajason ny tonony sy Raharisoa Norbert ny feony. Raha ilaina, « si bémol » ny haavom-peo takina.… Sady mariky ny fitiavan-tanindrazana rahateo ange ny fihirana ny hiram-pirenena e !